सेतोपाटी छैठौं वर्षमा :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
सेतोपाटी छैठौं वर्षमा
सेतोपाटी आजदेखि छैठौं वर्ष प्रवेश गरेको छ। पछिल्ला वर्षमा ब्रह्मले देखेका कुरा हामीले निर्भिकता र जिम्मेवारीसाथ पाठकमाझ राख्यौं, आउने दिनहरूमा पनि त्यो जारी रहनेछ।
पाँच वर्ष पूरा भएको अवसरमा हामी फेरि दोहोर्‍याउन चाहन्छौं- लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यता, राष्ट्रियताको पक्षपोषण, सुशासन र पारदर्शिता, सामाजिक परिवर्तन, नागरिक हकअधिकार र स्वाभिमानप्रति हामी सधैं चनाखो रहनेछौं। हाम्रोजस्तो विविधतापूर्ण नेपाली समाजलाई अघि बढाउने बाटो नै समावेशी लोकतन्त्रको मध्यमार्ग हो भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं।
यही वर्षदेखि मुलुकको राजनीति पनि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। मुलुकले लामो संक्रमणकाल पूरा गरेको छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको कार्यभार पूरा भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो काम सुरू गरेका छन्।
अबको चुनौती कानून र विधिको पालनामार्फत् मुलुकमा सुशासनको स्थापना हो। सुशासन विकासको पूर्वशर्त हो। सुशासनमा टेकेर मात्र विकास र सम्वृद्धिका एजेन्डा अघि बढाउन सकिन्छ। हामीलाई कस्तो विकास चाहिएको हो? विकासका सही नीति, रणनीति के हुन्? आ गामी दिनमा यी विषयहरूमा व्यापक बहस हुनेछन्।
हामी चनाखो भएर यी मुद्दाहरू पछ्याउने छौं, नेपाली समाजका सरोकारहरू पछ्याउनेछौं। हामीलाई विश्वास छ- पाठकहरुले हामीलाई पछ्यारहनु हुनेछ।
हामीले धेरै अघिदेखि भन्दै आएको स्वेच्छिक ग्राहक योजना यो वर्ष सुरु गर्नेछौं। त्यसमा प्रिय पाठकहरुको साथ रहनेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। आर्थिक आत्मनिर्भरता, दिगो र स्वतन्त्र पत्रकारिताकको आधारभूत शर्त हो भन्ने पनि हामी पाठकहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं।
सेतोपाटीलाई नेपालीहरूबीच संवाद गर्ने भरपर्दो मञ्च बनाउने अभियानमा हामी सदैव गम्भीरतापूर्वक लागिरहनेछौं। पाठकहरूबाट सधैं प्राप्त विश्वास र भरोसा हाम्रो पुँजी हो। यसले जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न हामीलाई सधैं प्रोत्साहित गरेको छ। पाठकहरूका प्रतिक्रिया र सुझाव हाम्रा मार्गदर्शन हुन्। हामी थप पाठक सहभागिताको निमन्त्रणा गर्दै आगामी वर्ष झन् खरो रूपमा प्रस्तुत हुने अठोट गर्दछौं।
प्रकाशित मिति: आईतबार, चैत १८, २०७४, ०२:०७:५४